JAALIYADDA REER WASHINGTON, DC OO U DIYAAR GAROWAYSA XUSKA 18KA MAY, 2016
Tuesday May 10, 2016 - 17:49:42 in Latest News by Super Admin
As you all know we, the Somaliland Community of the greater Washington DC, are planning our annual "May 18.” Somaliland is celebrating its 25th anniversary this year, and we have a big party planned featuring Somaliland’s own signer Nuur Daalacay direct from London, UK. There are also singers coming from Columbus, Ohio and local ones who will preforming with us that night.
Since we are planning to make this celebration our best event ever, we need your help to come and bring your children to the celebration. We are sure that you understand the importance and significance of celebrating this 25th anniversary in style. Please if you can dress up your children with Somaliland heritage clothes.
Thank you all and we will see you May 20, 2017 at 8:00pm. Get ready with a red carpet and please smile big.
Sidaad dhamaantiin la socotaan, The Somaliland Community of the Greater Washington DC, waxay diyaarinayaan u dabaal-dega 18 May oo sannadkani kusoo beegmay kiisii 25aad, markaa waxaanu qorshaynaynaa inuu sannadkani noqdo mid aad uga duwan kuwii hore loo soo qaban jiray. Waxaaynu nasiib wayn u helnay inuu inoo yimaado fanaanka weyn ee caanka ah Mr. Nuur Daalacay oo ka iman doonna London, UK. Waxaa kale oo inagala soo qayb gali doonna fanaaniin ka iman doonta Columbus, Ohio iyo kuwa kale oo magaalada inala deggan.
Maadaama aanu qorshaynayno in xafladani noqoto mid aad u heersaraysa, waxaanu idinka codsanaynaa inaad caruurtiina keentan si ay inoola qayb qaatan dabaa-degan muhiimka idinkoo u soo xidhaya astaamo muujinaya dharka dhaqanka Somaliland. Waxaanu filaynaa inaad fahamsantihiin muhiimada ay leedahay u dabaadega 25 guuraddii kasoo wareegtay markii Somaliland lasoo noqotay xoriyadeeda, taas oo u baahan inaynu dhamaanteen kasoo qayb galno inagoo muujinayna farxad iyo niyad wanaag.
Waxaa inoo balan ah habeenka bishu tahay May 20, 2016 saacada 8-da fiidnimo iyo idinkoo diyaar u ah habeen farxadeed.